ထိုင်းရောက် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ သံရုံး အစီအစဉ်ဖြင့် ယနေ. (၂၂-၅-၂၀၂၀) မှ စ၍ နေရပ် ပြန်ခွင့် ရမည် - Yangon Nation News
ထိုင်းရောက် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ သံရုံး အစီအစဉ်ဖြင့် ယနေ. (၂၂-၅-၂၀၂၀) မှ စ၍ နေရပ် ပြန်ခွင့် ရမည်
ထိုင်းရောက် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ အတွက် မြန်မာသံရုံးနှင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်း၍ မေ ၂၂ ရက်မှ စတင်ကာ နေရပ်ပြန်ခွင့် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဗန်ကောက်မြို့၊ မြန်မာသံရုံးမှ သိရှိရသည်။
မြန်မာလုပ်သားများ အနေဖြင့် ဗန်ကောက်မြို့၊ မော်ချစ် ကားဂိတ်မှ မဲဆောက်မြို့သို့ ဘတ်စ်ကား များ ဖြင့် သွားရောက်ခြင်းကို အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် မေလ ၂၂ ရက်မှ စတင်ကာ ည ၁၀ နာရီတွင် တစ်ကြိမ်၊ ည ၁၁ နာရီတွင်တစ်ကြိမ် ယာဉ်တန်းဖြင့် ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်တန်း တစ်ခုစီအတွက် ဘတ်စ်ကား (၅) စီး ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ မော်တော် ယာဉ် အစောင့်အရှောက် လိုက်ပါပေးမည် ဖြစ်သည်။
မော်ချစ် ကားဂိတ်မှ ထွက်ခွာမည့် ဘတ်စ်ကား တစ်စီးလျှင် ခရီးသည် (၂၁) ဦးသာ လိုက်ပါ ရမည် ဖြစ်ပြီး ဘတ်စ်ကား ငှားရမ်းခမှာ ဘတ် (၂၂၀၀၀) ကျသင့် သောကြောင့် တစ်ဦးလျှင် (၁၀၄၈) ဘတ် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပြီး ခရီးသည် တစ်ဦးလျှင် စုစုပေါင်း (၂၀) ကီလိုဂရမ် ထက်မပိုသော ခရီးဆောင်အိတ် (၂) အိတ် သယ်ယူခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ရက်အလိုက် စီးနင်း လိုက်ပါခွင့် ရရှိသော ခရီးသည်များသည် ခရီးထွက်ခွာမည့် ရက်တွင် ညနေ (၅) နာရီထက် နောက်မကျစေဘဲ မဟာချိုင်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး စခန်းတွင် လာရောက် စုစည်းရမည် ဖြစ်ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဘတ်စ်ကားများဖြင့် မော်ချစ် ကားဂိတ်သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မော်ချစ် ကားဂိတ်သို့ လာရောက် စီးနင်းရန် အလှမ်းဝေးသည့် နေရာ ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများ အနေဖြင့် မိမိတို့နှင့် နီးစပ်ရာ နယ်စပ်ဂိတ်များ (မယ်ဆိုင်-တာချီလိတ်၊ မဲဆောက်-မြဝတီ၊ ရနောင်း-ကော့ သောင်း) သို့ မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် သွားရောက်ပါက ညမထွက်ရ အမိန့်ပါ ကာလအတွင်း သွားလာခြင်း မပြုရန်၊ ခရိုင်ဖြတ်ကျော် ခရီးသွားခွင့် အတွက် အလုပ်သမား သံအရာရှိရုံးသို့ အမည်စာရင်း ပေးသွင်းရကြရန်နှင့် ယင်းအမည်စာရင်း များကို မြန်မာသံရုံးမှ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ ခွင့်ပြုချက် ရယူပြီးမှသာ အလုပ်သမား သံအရာရှိရုံးမှ ခရီးသွား တစ်ဦးချင်းစီကို သတ်မှတ်ရက် အလိုက် ခရီးသွား ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ထောက်ခံချက် ရရှိပြီးသူ များသည် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဌာနတွင် ခရီးသည် တင်ဆောင် ပြေး ဆွဲခွင့် လိုင်စင် ရရှိထားသော မော်တော်ယာဉ်များ ဖြင့်သာ ငှားရမ်း သွားရောက် ရမည် ဖြစ်သည်။
ယင်း အစီအစဉ်များ အတိုင်း နယ်စပ်ဂိတ် များသို့ ထွက်ခွာကြရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ အတိုင်း စနစ်တကျ သွားလာနိုင်မှု အပေါ် မူတည်၍ သွားလာခွင့် အရေအတွက် တိုးမြှင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Photo : U Thant Zin Aung facebook
အမေရိကန်တွင် ဆည်နှစ်ခု ကျိုးပေါက်သွားသဖြင့် လူသောင်းချီ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်း
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၂ နှစ်က အခိုးခံရတဲ့ကလေး မိဘတွေနဲ.ပြန်လည်ဆုံတွေ့